မေးနေကျမေးခွန်းများ | ဘာသာစကားသင်ခန်းစာများ
M-Learning တွင် မေးနေကျမေးခွန်းများ
1 M-Learning ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသည့်အခါ (အခွန်အားလုံးအပါအဝင်) တစ်ရက်လျှင် ၁၅၈ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် အခမဲ့ (သို့မဟုတ်) စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့် မရှိပါ။ ထို့အတွက် စာရင်းပေးသွင်းမှုအပေါ်တွင် စာရင်းပေးသွင်းသူအနေဖြင့် ကျသင့်ငွေကို ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက MPT ၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုရေးစင်တာ ‘၁၀၆’ သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
2 ဝန်ဆောင်မှုက ဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုအခပေးစာရင်းသွင်းရမှာလဲ။
(WiFi, 2G, 3G သို့မဟုတ် 4G) အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အခပေး စာရင်းသွင်းမှုအဆင့်မှုများကို အောက်တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
b) စာရင်းသွင်းမှု အောင်မြင်ပြီးသည့်နောက်တွင် သုံးစွဲသူသည် အောက်ဖော်ပြပါအတည်ပြု SMS ကို လက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
II. ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်ရမည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (သုံးစွဲသူအိုင်ဒီ/စကားဝှက် နှင့် ပေါ်တယ်လင့်ခ်)
III. အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာ – တစ်နေ့တာလေ့လာရမည့်အကြောင်းအရာ
3 ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူတွေ သုံးစွဲခွင့်ရှိသလဲ။
4 လက်ခံရရှိသော SMS အတွက် ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ။
5 M-Learning ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုပယ်ဖျက်နိုင်မလဲ။
6 User ID & စကားဝှက်ကို ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ။
7 M-Learning အတွက်လင့်ခ်ကို ဘယ်မှာ ရှာလို့ရနိုင်မလဲ။
8 M-Learning ပေါ်တယ်ကို ဘာလို့ ဝင်မရတာလဲ။
9 M-Learning ပေါ်တယ်က နှေးနေပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။/ ပေါ်တယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ချိန်မှာ တို့ထိတာ၊ ကလစ်နှိပ်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
10 ပေါ်တယ်သို့ အလွယ်ဝင်ရောက်နိုင်အောင် M-Learning ပေါ်တယ်စာမျက်နှာကို ဖုန်းထဲက တစ်နေရာရာမှာ သိမ်းထားလို့ရမလား။
11 M-Learning ဝန်ဆောင်မှုကို ဖုန်း/တက်ဘလက်တစ်လုံးအပြင် တခြားကနေရော ဝင်လို့ရမလား။
12 ကျွန်တော် မက်ဆေ့ချ် ပို့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းပြန်မက်ဆေ့ချ် ပြန်မရပါဘူး။